I-WaterProof yekhamera yekhamera - Zone
Ibhegi yefowuni yamanzi
I-backproof yendawo yokugcina amanzi
Isisombululo se-oem se-oem / i-odm sengxowa yamanzi kunye ne-backprooft yamanzi.
I-WaterProof yekhamera yekhamera
Ukho kwindawo efanelekileyo I-WaterProof yekhamera yekhamera.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana Zone.siqinisekisa ukuba ilapha Zone.
Ukusebenzisa le mveliso kuzisa lula ebantwini xa benomsebenzi we-BBQ. Abantu abaninzi bayavuma ukuba kubalulekile ukuthenga enye kwimisebenzi yokuhlanganisana yosapho..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu I-WaterProof yekhamera yekhamera.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
Iingxowa ze-Inserhele I-HORLER 20L CB003-20
Iimbonakalo:Iindonga zangaphakathi ze-zangaphakathi zigcina ukugcinwa kwabathiUkuthintela i-Deages engaphandle3.Usondeza ngaphakathi nangaphambiliI-Groultosonic Rf i-RF yelding njengoko isetyenziswa kumanzi amhlophe5.Ukugqitha i-tended padI-6.kuight of Parder ezantsi komoya ongezelelweyo
Abavelisi be-Couler ye-Couler Back Back ivela eTshayina
Umda weNqaku eliLuhlaza Gcwalisa inkqubo ye-QC: Kwizixhobo ezingafunekiyo kwiimveliso ezigqityiweyo, inkqubo engqongqo ye-QC yenze umgangatho weemveliso 'ozinzileyo.Iimbonakalo:1. I-TPU ye-TPU ye-nylon engaphandle i-nylon engaphandle ingamanzi, ukugxothwa, i-UV kunye nokunganyangeki kwamachiza2. Ukuvulwa ngokubanzi kwenza ukuba kulayishwe ngokulula kwaye kungalayishwa3. I-Duraflex Hardware kubandakanya amanqaku aphantsi4. I-2-intshi ngokubanzi ye-pad5. I-20 ye-QT ye-qt ene-liner yebanga lokutya, ipokotho yaseburhulumenteni enganyangekiyo6. I-leal ye-leakproof ikhusela imixholo, inkqubo yokufikelela kwi-winsery7. I-Premium yeKholamu ye-Premal iBandla, igcina i-ice ukuya kwiintsuku ezingama-3+8. Isiseko esiqinileyo, esinzima
I-Camouflage yangaphandle engaphandle ye-WASTROFT ye-20L CB007-20
Iimbonakalo:Intsebenzo yokupholisa i-1&iziselo zipholile ixesha elide. Umaleko wangaphandle unemigangatho yobungqina bamanzi ethi iqinisekisile ukuba akukho funga, umaleko ophakathi ngu-fight offint umxokelelwane kwaye i-Inter ifakwe ngokupheleleyo kwimibandela yokuvuselelaIinkcukacha ze-2.Suplecctialct: IBakala Lemkhosi iBala lezezixhobo, ixhaphakile kwaye inxibe imisebenzi yangaphandle yokwanda. Intambo ye-elaistion ye-elaistion inokusetyenziselwa amacala amabini anezitshixo , i-wallet, okanye iselfowuni. I-teet yentsimbi ye-shoil ye-shoil ifakwe i-zipper ye-zipper ilula kwiminwe kwaye yakhiwe i-zulc ye-zungud ye-Haul.2 ye-I-IPRECR ye-Haul.2 kwaye i-Soubper ye-Outd, kunye neNcwadi yomsebenzisi.I-3.100% yeLeakproof& Ukunganyangeki kwempembelelo: Ucolile opholileyo abonisa iqokobhe elinamanzi kunye neqokobhe elinzima ukuba unganyangeki kwiifrayini kunye nee-UV. Ubume obuqhelekileyo be-oval bukukuthintela ukuba ukrwitshwe. I-D-Buckle ingasetyenziselwa ukuxhoma isitshixo, iribbonI-4.Tree Iindlela zokuphatha: Izixhobo ezinemitya ekhuselweyo yamagxa kunye namacala amabini agubungela imitya. Ungayikhetha ngemingxunya yamagxa e-padding okanye ubambe icala lezihloko zecala elinzima ukuze wenze izandla zakho zikhululekeI-5.bpa yasimahla& Kulula ukucoca: I-liner yeendlela ezipholileyo ezithambileyo ezenziwe kwi-BPA yasimahla, umgangatho ophezulu. Kwaye ibhegi epholileyo ilula ukuyicoca, sebenzisa nje iitawuli zephepha ukuze ucoceke ngokulula kwaye ivumba ayizithanga, ukuthintela ukubumba kunye nokuthintela ukubumba.
I-TPU edandayo yefowuni yefowuni, ifowuni yefowuni eyomileyo ibhegi ye-UniverProof ye-Pouch ene-lanyard ye-iPhone
Inqaku:1. I-Poboof yefowuni ye-Waterproof: I-PAIN YABANTSI YOKUGQIBELA I-PAINT YOKUGQIBELA I-Pouch yenza ukuba iifowuni zakho zisebenzela emanzini, kwaye zithintela isixhobo sakho siphulukana& Ukuhamba emazantsi emanzini. Kukwenza wonwabe kwimidlalo yamanzi kunye nemisebenzi yamanzi ngaphezulu. QAPHELA: Ihambelana nazo zonke iifowuni ezi-smart kunye neemeko zabo ezininzi. Ukuba iifowuni ezinkulu kunye necala labo elikhulu nelinzima, akunakufihlaka, kwaye nceda ususe iimeko zabo ezinzima, kwaye isikhwama sokweza amanzi siya kuba nokuntywila;2. Nika ukuya kuthi ga kwi-65 yeenyawo zomsebenzi we-IPX8. Igcina ifowuni yakho ikhuselekile& yomile ukusuka emanzini, imvula, ukufuma, ukuchitheka, kumanzi kunye nobumdaka. Ulwanga lwamanzi, ulwandle luphezulu, i-diperproof, i-promoof. Unokubeka amakhadi etyala, ilayisensi, imali kunye nezinto ezimbalwa ezincinci;3. Ukuchukumisa okuchukumisayo: Ingxowa yefowuni inika i-crystal icinyiwe kwiWindows ebalaseleyo kumacala omabini wenziwe ngezinto ezinobunzima obuqaqambileyo 0.3 mm. Kugqibelele ukuthatha imifanekiso okanye iividiyo, ukhangela ii-imeyile, kwaye yonke enye into echukumisayo isebenza ukuba uyaqubha, ukuloba, ukuboleka amanzi. Qaphela: ungangcono unefowuni ngokubekwa kwekhamera, emva koko uhambe ngaphantsi kwamanzi kwaye usebenzise iqhosha lefowuni (hayi isikrini) ukuba uthathe umfanekiso okanye ividiyo;Phawula:1. Vavanya umsebenzi wamanzi kunye nezicubu ngaphambi kokuba nise;2. Xa kuthelekiswa ne-Pouches ezininzi zangaphantsi kwiimarike, ezo zinto zisebenza onke amaqhosha asekhaya (kubandakanya i-iPhone 7/8/7 i-iPhone yesi-7/8 / 8plus; kwakhona, i-Wiblus eyilelweyo (i-8% enkulu) izisa amava angcono ;3. Zonke izibuko kunye namaqhosha afikeleleka ngokulula, kodwa hayi kumnwe wesazisi;4. Kulula ukuyifaka okanye ikhuphe iifowuni ezi-smart emva kokubetha ngendlela embalwa yokusebenzisa.
Ibhegi yefowuni ye-WPCOf ye-WPC32132
Inqaku:1.NOKI: 1. Umsebenzi wokwamkelwa komnwe awufumaneki. 2. Izikrini zokuchukumisa ziya kusebenza xa uxinzelelo lwe-hydraulic. Nceda ubheke kwifowuni yakho kwiindlela zevidiyo kwaye ucofe ukuqala ngaphambi kwamanzi kwaye uthathe imifanekiso ngamaqhosha evolumu yoomatshini.Ibhegi yefowuni edadayo yefowuni: I-Poich yefowuni yamanzi iyafundwa nge-fubble ye-moya kwicala lakho elivumelayo kwaye liphephe iindleko xa i-lanyard yakho yayingaphandle kohambo lwakho. I-Buoysan ixhaswe ukuya kwi-8.8 Oz / i-250 yeegram ngaphezulu.I-3.Pipx8 I-Poich yefowuni ye-Waterproof: ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-100 / iimitha ezingama-30 zeemitha ezinobunzulu, zikhusela ifowuni yakho xa ungenayo kwaye uthatha imifanekiso ephantsi kwevolumu yokuthatha imifanekiso). Qiniseka nje ukuba ukutywina ibhegi eyomileyo yefowuni yefowuni ngaphambi kokusebenza phantsi kwamanzi.4.Umva kwengqondo ye-Fool: kunye nenqaku lokunganyangeki kobushushu, yonke imisebenzi iya kuba yindlela efanelekileyo ngakumbi kuneselula yeselula, nokuba yimvula enkulu, okanye kwisanti yesaqhwithi. Iingxowa zamanzi zinokusetyenziselwa ukuhlamba kwimithombo eshushu (ayidluli i-122 ° F)5.Ukuyilwa komntu kunye nempahla: Ityala lefowuni ye-Aterproof kunye nezinto zeFluorecent, ziya kukwenza wahlukile phakathi kwesihlwele xa ubunxiba. Isixhobo se-TPU seselfowuni yeselfowuni yenza ukuba uzive uthambile, isikhwama samanzi sinokubamba amaqhosha egumbi, ipasipoti, okanye imali. Elwandle, iphuli yokuqubha, i-diving, kayak, ifowuni yakho, unokuyithemba ukugcina izinto zakho.
Ingxowa yefowuni yefowuni ye-WPC3211
Inqaku:I-1.IPX8 I-Universial Foundroof i-Pouch ye-Pouch: Ubuchule bamanzi ukuya kwi-100 yeemitha / iimitha ezingama-30. Qaphela: 1. Nceda uthathe uvavanyo lwe-tisce ngaphambi kokusebenzisa le ngxowa eyomileyo yeWater. 2. Iifowuni zeselfowuni zinokuba nengcinezelo ye-hydraulic phantsi kobunzulu bamanzi obuya kuyichaphazela ukusebenza kwe-couchcreen. Ungathatha imifanekiso ngamaqhosha evolumuI-2.ight ichukumisa-inovelwano-Qaphela: ayixhasi ukwamkelwa komnwe we-ID. Izixhobo eziphezulu zeplastiki zePVC zinika imvakalelo yesikrini esigudileyo kunye nengxelo ecacileyo. Ngesi sibhengezo sefowuni esibonakalayo ungathatha imifanekiso, ukuthumela i-massage, ukwenza umnxeba, okanye kwi-intanethi kunye nabahlobo bakho3. Ngokucacileyo-ngokungathandabuzekiyo ukuba akukho mthintelo ukuba akukho mqobo xa uthatha imifanekiso ecacileyo, kufuneka ulawule umsantsa phakathi kwelensi yefowuni kunye neplastiki. Yonwabela ixesha lakho lokuzonwabisaI-4.100% i-Airtight Androof yefowuni-le nqaku yengxowa yefowuni ivumela ukuba ungayigcina amakhadi akho kwaye uzigcine uhambisa umoya ngaphakathi kweselfowuni. Inxalenye ye-chick yamkela uhlobo lokugoba, ukwahlukana nokutywina, kwaye iinxalenye zilidleldic weldic, amanzi amaninzi5.Ukulungiswa& Iguqukile& Inokuthenjwa-umtya wentamo wawusandiswa ukuya kuthi ga kwi-0.6 intshi ububanzi, imvakalelo yesilika, ungaze unqumle izikhumba, kwaye i-lanyard inokulungelelanisa ukusuka kwi-intshi ezili-15 ukuya kwi-intshi ezingama-23 ngelixa ixhonywe entanyeni. I-STUREY FINGFESFFESHEIRY HOS Hook ikuvumela ukonwabele ukuzonwabisa kwamanzi
Iingxowa ze-prooty ezifakelweyo zeeklabhu zangaphandle ezingenamsebenzi kwi-japan
Abathengi baseJapan basifumana kuGoogle kwaye baqhutywa ngobukhali beenzululwazi kunye nokuqonda iwebhusayithi yethu esemthethweni. Emva kokunxibelelana neqela lethu lokuthengisa nge-imeyile, bathumela iisampulu zemveliso abafuna ukuyenza, kunye ne-r&Iqela le-D liqhuba uphando ngokusekwe kwiimpawu zemveliso. Yenza imizobo yoyilo kunye noyilo, kwaye ufumane izixhobo ezizodwa kunye nezinto ezizodwa ngokweemfuno zabathengi, kwaye ekugqibeleni uqinisekise ukuveliswa kobuninzi emva kweesampulu ezibini. Abathengi banika ingxelo yokuba iimveliso zethu zinobuhlobo bokuphuma ngaphandle kwaye zenzelwe ukuba zibekho kakhulu. Wonke umntu makazinandiphe ubomi bokuphumla yindawo yethu yokusukela.
Ngaphantsi kwe-Pundw screen screen siselproof Ingxowa yefowuni
Inqaku:1.10M Underwater Screen Touch kunye Double Unique Faces Design - The ngaphambili square ehamba screen touch isekela ubuso igridi, kwaye kucacile ezibhityileyo window umva ivumela touch screen ukusebenza ngokupheleleyo ezisetyenziswa imihla ngemihla ezifana umnxeba, itekisi, iifoto, ividiyo okanye lokhangelo akhululeke. Sebenza ngeqhosha lasekhaya kunye nesazisi se-ID, kodwa akukho manqaku eminwe.Ukuphatha i-lanyard yentanyephu - kuza nelali engenakuphikiswa kunye nokuqhwaba intsholongwane exhonywe intamo ngokukhululekileyo. Ukuhamba ngokulula kweselfowuni ngaphandle kwezandla xa kunetha ngaphandle, ukupheka kwekhitshini.I-3.Use-IPX8 IPRECARE IPXP8 IPROOF-I-SHROORE YINYAKA I-POLYVIYL CHLORIYL (PVC) I-TAVICS SURDS NEENKONZO ZEXESHA LOKUVULA LWEZIBONELELO ZOKUGQIBELA, Ikhephu, Uthuli kunye nothuli, uthuli kunye nothuli.Ibhegi ye-Foullifoonter Ifowuni eyomileyo ye-BUTROOF: Inokuba yingxowa eyomileyo ye-ID, amakhadi etyala, imali, umdlali we-MP3 player kunye nezitshixo.Phawula:1. Vavanya umsebenzi wamanzi nge-tishu ngaphambi kokuba nise;2. Xa kuthelekiswa ne-Pouches ezininzi zangaphantsi kwiimarike, ezo zinto zisebenza onke amaqhosha asekhaya (kubandakanya i-iPhone 7/8/7 i-iPhone yesi-7/8 / 8plus; kwakhona, i-Wiblus eyilelweyo (i-8% enkulu) izisa amava angcono ;3. Zonke izibuko kunye namaqhosha afikeleleka ngokulula, kodwa hayi kumnwe wesazisi;4. Kulula ukuyifaka okanye ikhuphe iifowuni ezi-smart emva kokubetha umoya okokuqala usebenzisa amaxesha ambalwa.
I-TOTE COOLER YIBHENO I-Couleler Tooler Tote - iilitha ezingama-20 ze-CB008-20
Iimbonakalo:I-1. 1. Ibhola yelaphu engalunganga ilula kwaye iphosa amanzi; I-Wipper ye-ZIPRORT ye-ZIPRORT kunye ne-Weamd Seams qinisekisa ukuba i-leakproof yokuThutho2.Tomovaked Complerters quids kwaye i-tendes ekhululekile ivumela ukhetho oluninzi lwentengiso3.smart i-insulliser igcina ukubanda ukuya kuthi ga kwi-36 hrs.I-4.ilner yinqanaba lokutya le-FDA kunye ne-BPA-free5.mehlo angama-24 e-SODO YOBUGCISA OKANYE I-IC
I-Shenzhen I-ICbe Cross-Rions
Umda we-Shenzhen I-Shenzhen I-ICbe Umveliso weMiboniso we-E-Commerce Windows ovela eTshayina, 7. I-OMBI STOM / IENKONZO ZE-ODM: ngolwazi oluqinileyo lwezixhobo, ukulila, ukulungisa, oomatshini kunye nezixhobo ezibonelela ngokubonelela ngemvume yokuphela kwemveliso. Sithumela ngokusemthethweni izimvo zakho kwaye siqinisekise iprojekthi yakho.Ukusuka kwi-Oct. 8 ukuya kwi-Oct. 10, imimandla ethathe inxaxheba kwi-Shenzhen I-Incbe-Comece-Commerce Resm. Umboniso ubonelela ngelinye iqonga leminye iqonga labathengisi behlabathi le-E-Commerce Rists. Njengowona mthengisi wawuthandayo we-Amanzi ye-Amastroof ye-Amanziof Pobroof Points, iMimandla kufuneka ithathe inxaxheba kulo mboniso. Ngexesha lomboniso, iinjineli zendawo yemimandla kunye nabaqulunqiweyo zimi kwingxaki yokuzimela kwabathengi, kwaye zibeka phambili imibono yoyilo yangaphambili kunye nezisombululo zoyilo zangaphambili kunye nezisombululo zeengcamango zabathengi kunye nobuchule beemveliso. Ngenxa yentshukumo yeqela eliqeqeshelweyo, kukho abathengi be-odom ngqo kuloo ndawo.
I-Poultifontial I-Stainking Water Baby, Ingxowa yokuloba BB02
Iimbonakalo:1.Umbhalo owongamileyo: Ingasetyenziselwa ukuhlamba iziqhamo kunye nemifuno, izinto zokugcina okanye njengebhakethi yenyawo, ilungele ukuhamba, ukunyuka intaba, kunye nezinye izinto ezininzi zangaphandle.I-2. 2. Impahla esemgangathweni: Sisebenzisa i-PVC I-PVC ilaphu njengempahla, eyomeleleyo kwaye ilawula umgangatho wemveliso.3.Ukuba amanyathelo oKhetho: Sinokhetho lwe-10l kunye no-20l kunye nobukhulu obungafakwanga φ9.8 "* 8.3.3" ,.3 ",.3" ,.8 "Ngokuzenzekelayo. Iintsimbi ze-0.5lb kunye ne-0.7lb ngokulandelelana. Ungakhetha ubungakanani obathandayo.I-FooterProof kunye neLeakproof: Umzantsi wenziwa ngoyilo lwaManzi aluhlaza, olunokuthintela ngokuphumelelayo kwaye lubonelele lula ukusetyenziswa komsebenzi wobuninzi bebhakethi.8.Izibamba ezikhutshelweyo: Izikhuselo zenziwe kumacala omabini e-bhakethi, ukuvumela ukuba uphathe ngcono izinto. Ngumncedisi olungileyo wokuhamba ekhaya.
Emva kwenyanga engaphezu kwenyanga, kwintlanganiso yokuqala kulomboniso wotyelelo lomthengi kumzi-mveliso wethu, ukuphononongwa komntu wesithathu kwezixhobo zefektri, kunye nemveliso yokugqibela, kunye nezixhobo, itekhnoloji ekhokelayo, kwaye Olona vavanyo lwemveliso lupheleleyo. Ingxelo kunye neziqinisekiso ezahlukeneyo zesatifikethi, ezidityanisiweyo nentsebenziswano esondeleyo phakathi kweqela lentengiso kunye neqela loyilo, yanika abathengi impendulo eyanelisayo kwaye iphumelele ukuthembana komthengi kwaye waphumelela ukuthembana komthengi.Ngeminyaka yamava kwimveliso kunye noyilo lweengxowa zamanzi, iMimandla iphendula ngokukhawuleza kwaye ikhawuleza iveze izimvo zabathengi kwiimveliso ezifanelekileyo. Ngokwemarike yomthengi kunye neempawu zomthengi ophelileyo, ngokuqhubekayo ukuphucula imveliso kwaye unike ingcebiso malunga nabathengi. Imveliso yokugqibela yomthengi ithengiswa kwimarike yendawo.
Ukuba unemibuzo emininzi, bhala kuthi
Sixelele nje iimfuno zakho, singenza okungaphezulu koko unokucinga.
Thumela UKUFUNA NGOKU
I-Copyright © 2021 I-Shenzhen yeMidlalo yeMidlalo ye-CO.
Khetha ulwimi olwahlukileyo